China Polarized Sunglasses dzeVarume neVakadzi Zuva magirazi Ruvara rweMirazi Mirror 100% UV Kuvhara Kugadzira uye Fekitori | Baolai
Polarized Sunglasses dzeVarume neVakadzi Zuva magirazi Ruvara rweMirror Lens 100% UV Kuvhara
1. purasitiki puranga
3. ★ DZIVIRIRA MAZISO AKO NESITAYARA ▶ Isu takagadzira magirazi edu akapindirwa kuti TIChengetedze maziso ako paunenge uri pasi pezuva rinokuvadza mwaranzi yeUV uye kukuita kuti utaridzike USINGANGWIRANE panguva imwe chete, nekuti isu tinoziva kuti Hutano uye Maitiro zvese zvakakosha. Kunyangwe iwe uchityaira, uchifamba kana uchishanda, ungave uri murume kana mukadzi, zvigadzirire iwe kune zvese zvakakosha KUTENGA iwe zvaunogona kuwana uye negodo revose avo vasingakwanise kuziva YAKO DIKITI CHAKAVANZIKA: Yako KALIYADI Magirazi.
4. ★ IVA ZVIMWE ZVAKANYANYA KUZORODZWA ZUVA ROSE ▶ Idzo magirazi ezuva anouya nepamusoro akapihwa POLARIZED LENSES iyo isu takaiyedza nekufamba kwenguva. Polarization inoderedza kupenya kunoratidzwa nemirazi, kupenya kana kupenya zvinhu kana chero imwe mhando yezuva rinoratidzira. Iwe unozonzwa maziso ako akasununguka zvachose nekuti hauchazonanzva zvakare! Kunyangwe iwe uri kutyaira kuenda kubasa, uchifamba mupaki kana iwe uchinge uine sunbath yakanaka pamhenderekedzo yegungwa, iwe uchave UCHIDZIDZA KUNETE pakupera kwezuva nekuti maziso ako ANONYANYA KUZORODZWA.
5. ★ ONA PASI PENYIKA MUMAKORE AKO ECHOKWADI HD Iwo maLens akasungirirwa nemagirazi edu ezuva anopa hutema hweCHOKWADI nekuda kwekusarerekera kwemavara uye CLEAR VISION nekubvisa mwenje unoratidza uye wakapararira. Naizvozvo iwe unozogona kunakidzwa nemagirazi ezuva panguva yako yese yekunze zviitiko, kutyaira, hove kana chero mutambo wemvura zvakare. CHIMBOFUNGIDZIRA KUTI UNOGONA KUNA KUTI UNZWE usingafanire kunetseka nezve maziso ako hutano uchikwanisa kunakidzwa nekuyemura nyika mune ese akanaka tsananguro.
6. ★ FAMBA YEMAHARA UYE UNZWE KUSUNUNGUKA ▶ Isu tinoziva mafungidziro asina kugadzikana anogona kuva uye kuti izvi zvinokanganisa sei munhu wese akapfeka. Isu tine hanya nezve chiono chako uye tinoda kukubatsira kuti uchengetedze magirazi ako ezuva kwenguva yakareba sekuda kwaunenge uchiada. Naizvozvo isu takanhonga Ultra-mwenje zvigadzirwa zvegirazi furemu, yakaputsika yakaremara lenzi uye isu takatarisira kuitira kuti mhedzisiro yega isedzere uye ikwenenzverwe kuitira UCHAZVIKANGANIRA KUTI UNOPFEKA Ivo kunze muzuva. Kupfeka magirazi ezuva hakuna kumbobvira kwanyanya kuzorora, kuchengetedzeka uye kugadzikana kupfuura IZVOZVI!
Chinhu icho kwete. 10161-6354
Saizi 53x60x17 masendimita
Pashure: Aviator Sunglass yeVarume 100% UV Dziviriro Goggle Alloy Chimiro
Zvadaro: Wholesale Magirazi egirazi Bulk yeVakuru Bato Anofarira Retro Classic Shades
Aviator Magirazi egirazi evarume 100% UV Dziviriro G ...